OMN: Mana Daldalaa Obboleettii Obbo Jawaar Mohammad kan taate Mishaa Siraaj Mohammad irratti tikni mootummaan saamicha raawwate. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOMN: Mana Daldalaa Obboleettii Obbo Jawaar Mohammad kan taate Mishaa Siraaj Mohammad irratti tikni mootummaan saamicha raawwate.
OMN: (Fulbaana 29, 2020) Mana Daldalaa Obboleettii Obbo Jawaar Mohammad kan taate Mishaa Siraaj Mohammad irratti tikni mootummaan saamicha raawwate.
Magaalaa Adaamaa keessatti hojii daldalaatti bobbaatee kan jiraattu, Obboleettii Obbo Jawaar Mohammad, ‘guyyaa kaleessaa poolisiin Federaalaa fi Oromiyaa suuqii daldalaakoo saamuudhaan, meeshaalee birrii kuma dhibba lama (200,000) olitti tilmaamu na jalaa fudhatan’ jechuun OMN-tti himte.
Adde Mishaa Siraaj jiraattuu magaalichaa yoo taatu, hojii daldalaatti bobba’uun ishee waggaa guutuuf akka adeemu dubbatti. “Akka lammi biyyattiitti gibira daldalaan tokko baasuu qabu baasee, hayyama guutuudhaan hojiitti bobba’ee utuun jiruu, sababa obboleettii Jawaar Mohammad ta’e qofaaf mootummaan amilee maatii kootii miidhuuf, rakkoo dinagdee keessatti na kuffise” jechuun dhimmicha OMN-iif ibsiteetti.
Akka Mishaan jettutti, erga Obbo Jawaar Mohammad hidhamanii as, dhiibbaan mootummaatiin, kallattiifi alkallattiidhaan Maatii Obbo Jawaar irratti godhamaa jira. Lakkoobsa Herrega Baankii maatii Obbo Jawaar akka hin sochoonetti cufamuurraa hanga dhaabbileen daldalaa isaan dhuunfaan qaban saamamuutti qaqqabeeras jetti.
“Guyyaa kaleessaa tikni Mootummaa Konkolaataa lamaan meeshaalee mana daldalaa kootii saamee fe’atee deeme” kan jettu Mishaan, bakka isaan meeshaa saaman kana geessaniifi sababa maaliif akka saaman gaafattus deebii namni isheef kenne akka hin jirres OMNtti himte.
Guyyaa har’aa kanas, tikni mootummaa Konkolaataatiin dhufanii, hojjettoota suuqichaa to’achuun fudhatanii deemaniirus jechuun haala achi jiru nutti himteetti.
Obbo Jawaar Mohammad beellama mana murtii duraaniirratti yeroo dhihaatan “sababa koo, dhiibbaan maatii kiyyarratti godhamu dhaabbachuu qaba. Ani nama biyyaati; nama siyaasaati.” jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama.